ट्विटरले एकाउन्ट सुरक्षित राख्न भौतिक 'सेक्यूरिटी की' को सहारा लिने - Technology Khabar
» ट्विटरले एकाउन्ट सुरक्षित राख्न भौतिक ‘सेक्यूरिटी की’ को सहारा लिने
ट्विटरले एकाउन्ट सुरक्षित राख्न भौतिक ‘सेक्यूरिटी की’ को सहारा लिने
ट्विटरले अब आफ्नो प्लेटफर्म अधिक सुरक्षित बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ। कम्पनीले केहि समयअघि घोषणा गर्‍यो कि उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूको एकाउन्टमा बढी सुरक्षा प्रदान गर्न टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इनेबल पार्ने विचार गरिरहेका छन्, जसमा तिनीहरूले केबल सेक्यूरिटी कीहरू मार्फत मात्र लगइन गर्न सक्षम हुनेछन्।
हाल, प्रयोगकर्ताहरूले सेक्यूरिटी कीहरूमार्फत लगईन गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरूलाई ब्याकअपमा तेस्रो-पक्ष टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ।
कम्पनीले भर्खरै भनेको छ कि उनीहरू यी सुरक्षा उपायहरू कार्यान्वयन गर्न लागेका छन् तर वास्तवमा यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।
हालैको ट्वीटमा, ट्विटरले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको एकाउन्टहरू अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्नका लागि मद्दत गर्न भविष्यको योजनाहरू घोषणा गर्‍यो। कम्पनीको सेक्यूरिटी कीहरू प्रयोग गर्ने योजना छ।
के हो सेक्यूरिटी की ?
यी भौतिक सेक्यूरिटी कीहरू हुन् जुन यूएसबी वा ब्लुटुथ मार्फत पीसीमा जडान गर्न सकिन्छ। यसको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई पासवर्ड टाइप गर्न आवश्यक पर्दैन, यसको अर्थ यसलाई मालिसियस सफ्टवेयरले तोड्न सक्दैन।
सेक्यूरिटी की अर्थात सुरक्षा साँचोहरूको फाइदा के हुनेछ?
सेक्यूरिटी की (भौतिक की) को फाइदा यो हुनेछ कि प्रयोगकर्ताहरूले ट्विटरमा लगइन गर्न प्लेटफर्मको साथ अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा गर्नुपर्दैन। प्रयोगकर्ताले केवल सेक्यूरिटी की आफ्नो प्रणालीमा जडान गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि सुरक्षा क्रिप्टोग्राफिकरूपमा खाता प्रमाणीकरण गर्न र लगइन गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले मल्टिपल सेक्यूरिटी कीहरू प्रयोग गर्न सक्ने
ट्विटरले घोषणा गर्‍यो कि उनीहरूले एकल प्रयोगकर्ताहरूलाई मल्टिपल सेक्यूरिटी कीहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। अहिलेसम्म, प्रयोगकर्ताहरू केवल एक सुरक्षा साँचो प्रयोग गर्न बाध्य थिए। यसअघिको डिसेम्बरमा, ट्विटरले यसको मोबाइल एप प्रयोगकर्ताहरूको लागि टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सक्षम खाताहरूको लागि सेक्यूरिटी की सपोर्ट जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
ट्विटरले यी सुरक्षा सुविधाहरूको कार्यान्वयनको विवरण साझा गरेको छैन् । एजेन्सीका साथ
सगरमाथा आधार शिविरमा वाई-फाई सेवा पुर्याउने दूरसञ्चार प्राधिकरणको योजना
रियलमीले यूआई २.० मा आधारित नयाँ स्मार्टफोन ल्याउने